Amar la dul-dhigay Shirkado ka howlgalla Magaalada Khardho - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Amar la dul-dhigay Shirkado ka howlgalla Magaalada Khardho
Amar la dul-dhigay Shirkado ka howlgalla Magaalada Khardho
Kadib Kulan ay maanta yeesheen Maamulka Magaalada Khardho ayaa waxaa ay soo saareen Go’aano iyo Amaro ku socda Shirkadaha Nootaayooyinka & Bangiyada ka howlgalla degmadaas.
Kulanka ayaa waxaa laga soo saarey Shan qodob oo u badan amar kaas oo ku socda Bangiyada,Nootaayooyinka iyo Shacabka ku nool degmada Khardho ee Gobolka ay Puntland u taqaano Khardho.
1: In Nootaayooyinku aysan kala wareejin karin ama kala gaddi karin hanti ma guurto ah ama mid kaleba ilaa ay soo maraan hanaanka sharci ee dawlada.
2: Shacabka waxaa la faray in labada nootaayo ee kala ah Kaafi iyo Karkaar wax aan ahayn aan laga samaysan karin wax decomenti ah, Maadama ay yihiin kuwa soo maray hanaanka sharcigga dawladuna ay Aqoonsan-tahay.
3: Maamulada Bankiyadda ayaa la faray in ay aad uga fiirsadaan in dadka ay wax u maal-gelinayaa ay soo mareen nootaayooyinka Sharciga ah ee dawladu aqoonsan-tahay.
4: Nootaayooyinka ayaa la faray in ay goostaan shatiyadda ganacsigga, Sidoo kale ay bixiyaan canshuuraha ku waajibay.
5: Dawladu waxay sheegtay in talaabo laga qaadi doono cidii si sharci-darro hanti u kala wareejisa, Ama u qorta araaji lagu socod-siinayo xafiisyadda dawlada.
Previous articleCiidamada Dowladda & kuwa KG oo howlgal qorsheysan fuliyey
Next articleSoomaaliya & Beesha Caalamka oo ka shiray doorashada soo socota